> Resource > iPhone > iPhone mini Release Date iyo Price: News Iyo Wararka Xanta
Apple sii daayo doonaa iPhone mini ah?
Mini iPhone ayaa lagu xamanayey muddo bilo ah. In hore ee 2013, oo ah falanqeeye ayaa sadaaliyay in Apple sii daayo lahaa low-jaban iPhone ah, cusub iPhone mini, in xagaaga soo daahay ama horraanta dayrta. Sida muuqata, Apple ayaa soo bandhigay 5S ah iPhone iyo 5C iPhone ah dunida, halkii loogu yeero iPhone mini. Hadalku waa ku Apple ma sii daayo lahaa mini iPhone ah? Waxaa jira dhawaaqyo fara badan baa shakiyey.
Sababtoo ah qiimaha sare ee iPhone, users badan oo weli aan tahli karin, in kastoo ay tahay taageerayaasha Apple dhabta ah. Waxay halkii dooran lahaa model ah oo gaboobay oo ah iPhone ama casriga kale la mid ah, halkii ay ka helayso mid dambeeyay. Haddii Apple doonayaa in laga adkaado Samsung oo ay ka badiyeen saldhig weyn ee macaamiisha, hoose-dhamaadka iyo qalab jaban ("iPhone mini") waa lagama maarmaan. Waxaa la wado lahaa dakhliga kordhiyo iyo faa'iido guud, iyo waxa uu xaqiijiyay Katy Huberty, oo ah falanqeeye la baanka ah. Shirarka, iyada oo la Apple Madaxa Sarkaalka Maaliyadda Peter Oppenheimer ka dib, ay hoosta ka xariiqday in hoose sicir iPhone macno sababo dhowr ah:
1. "IPad Mini ayaa waxaa loo kordhiyay Apple ee macaamiisha 50 [boqolkiiba] gadashada ee Shiinaha / Brazil oo wakiil ka ah macaamiisha cusub in hannaanka deegaameed."
2. "Macaamiisha Chinese muujiyaan rabitaan ah in ay iibsato version ugu dambeeyay ee iPhone (halkii ab ka weyn dhimis)."
3. "IPhone 4 baahida yaabay inay ka yeellay korkoodii ee quarter December ee."
Waa maxay doono mini iPhone la mid ah?
Isla dhibic ka dhan wararka xanta ah ee ay tahay in mini iPhone noqon doonaa qalab low-dhamaadka ah. Sida yar, kala duwanaansho ka raqiisan ka mid ah iPhone, waxay yeelan doontaa 3.5-inji ama 4-inch shaashad, jidhka wax yar ka sii dhumuc weyn oo caag ah, oo ah processor Apple J5, isla camera 5-megapixel sida 4 iPhone, iyo imaan doono shan midabo. Afar ka mid ah midabo kala noqon doonaa caddaan, madow, casaan, iyo buluug ah.
Ka sokow, Mini iPhone wuxuu la iman doonaa mid aad u yar xasuusta isku dhafan, laakiin inaad kala soo baxdo iyo codsiyada orod ku filan. "Waxa ay yeelan doontaa xusuusta kaliya ku filan oo ay iska xejineyso warbaahinta huleeshay ka daruurtii," ayuu qoray nidaam ah Mac. "The [qalab] dumin doonaa ALL waa content ka MobileMe. Marka dadka isticmaala filim ama TV show ah oo ku saabsan Lugood iibsan, waa la heli karaa si ay u sii qulquli in ay iPhone ama iPad."
Next, aynu hubi qaar ka mid ah "xaday" sawirro iPhone mini:
Intee in le'eg Apple qiimaha doonaa cusub iPhone mini?
Sida qiimaha, mid hooseeya waxaa lagu sheegay in $ 99. Haddii ay tani tahay mid run ah, waxa ay noqon doontaa news weyn ugu funs Apple aan awoodin iPhone ka hor.
Inta badan dadka falanqeeya u malaynaysaa in ay soo bixi doonto qiimo dhan $ 350 ilaa $ 400, iyada oo aan heshiis. Taasi oo ku saabsan kala bar inta ugu badan iPhone 5. Qaar kalena biinka qiimaha iPhone mini ee u dhaxaysa $ 200 iyo $ 250. Si kastaba, haddii mini iPhone ah ay wanaagsan tahay, oo qiimihiisa waa run ahaantii ka hooseeya iPhone kale, Apple, hubaal soo jiidan doona koox kale oo ka mid ah dadka. Bal aan isha ku hay waxa on.
Wararka xanta ah ee The New iPhone 6: Release Date, Pictures, Price, Features, iwm
Siyaabo Free inuu ka soo kabsado Xogta macruufka Devices ee Mac OS X El Capitan
Sida loo ka Your iPhone Delete Apps
2 Siyaabaha Undelete Apps on iPhone
Sida loo hagaagsan Thunderbird la iPhone
Dib u celi Jaibroken iPhone la / aan laga badinin Features jailbroken
Wondershare IPhone Transfer: Best iPhone Kaaliyaha
Sida loo Copy Photos ka PC si iPhone